चिउरा अड्केर बालकको मृत्यु, स्कुलको लापरबाही !
न्यूज सञ्जाल १८ जेष्ठ २०७६, शनिबार ०८:५१
विराटनगर । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–५ रमाइलो बजार नजिकै रहेको मकालु मोरङ इङलिस स्कुलमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीको स्वास नलीमा चिउरा अड्किएर मृत्यु भयो । तर, बालकका आफन्तले भने समयमै अस्पताल नपुर्‍याउनु विद्यालयको लापरवाही मान्छन् । मकालु मोरङ स्कुलको कक्षा ३ मा ...
शिवगञ्जमा सहाराको स्वास्थ्य शिविर, पाठेघरका क्यान्सर रोगीलाई लाभ
न्यूज सञ्जाल १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार २०:२७
झापा । शिवसताक्षीका अधिकांश महिलाहरुमा पाठेघर र आङ्गखस्ने समस्या विकराल बन्दै गएको देखिएको छ । शुक्रबार साहारा नेपाल चारपानेको आयोजना र शिवगञ्ज सेवा केन्द्रको संयोजनमा भएको एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा यस्तो समस्या देखिएको हो । पाठेघरको परीक्षण गर्न आएकामध्ये ...
डाँगीबारीका महिलालाई अचार बनाउने तालिम
न्यूज सञ्जाल १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १९:१३
डाँगीबारी । बाह्रदशी गाउँपालिका ७ नम्बर वडामा रहेको वडास्तरीय महिला समितिको आयोजनामा तीन दिने अचार बनाउने तालिम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष मित्रराज भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यमा भएको समापन कार्यक्रममा गाउँपालिकास्तरीय महिला सञ्जालकी अध्यक्ष रेनुका भूर्तेल, ...
आगो नियन्त्रणमा, विद्यालयको आवास गृहमा पूर्ण क्षति
न्यूज सञ्जाल १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १७:०९
फिदिम : पाँचथरको फालेलुङ गाँउपालिका–५ प्राङबुङको एक आवास गृहमा आगलागी भएको छ। कालिका माविको तीन कोठे आवस गृहमा शुक्रबार दिउँसो आगलागी भएको हो। विजुलीको तार सट भएर आगलागी भएको वडाध्यक्ष जिवनकुमार राईले जानकारी दिए। 'आगलागीबाट आवास गृहमा पूर्ण क्षती पुगेको ...
पुरातात्विक संरचनाको जीर्णोद्वार कि शिलन्यास ?
न्यूज सञ्जाल १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १६:३५
हिमाल खरेल, झापा । कुनै पनि पुरातात्विक संरचनाको संरक्षण गर्नु आफैँमा राम्रो काम हो । तर, त्यसलाई तोडमोड गरेर आफ्नै तरिकामा नवनिर्माण गर्नु आपत्तिको विषय हो । यस्तै भएको छ, झापा नेपालकै एक एतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनाको । नेपालकै होचो ...
सहाराले गर्यो छ हजार पशुपंक्षीको निःशुल्क उपचार
न्यूज सञ्जाल १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १६:२१
झापा । सहारा नेपालको आयोजनामा बिर्तामोड ७ मा शुक्रबार बृहत पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ । शिविरलाई बिर्तामोड नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको हो । सहाराका पशु चिकित्सक डा. कमलेश्वर भाटका अनुसार शिविरमा तीन सय घरधुरीका छ हजार पशुपंक्षी लाभान्वित भएका ...
प्राङवुङको आगलागी नियन्त्रण प्रयासमा प्रहरी
न्यूज सञ्जाल १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १४:११
फिदिम । प्राङवुङको एउटा भवनमा अहिले आगलागी भइरहेको छ । विजुलीको तार सर्ट भएर आगलागी भएको अनुमान गरिएको छ । उक्त भवनमा शिक्षक योगेन्द्र रेग्मी र देवी कटुवाल डेरा वस्दै आएका थिए । आगलागीमा दुवै शिक्षकहरुका सामग्री र लत्ता कपडा ...
आरुबोटे घटनामा मानबहादुर एक्लै रहेको प्रहरी निश्कर्ष
न्यूज सञ्जाल १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १३:५०
फिदिम । पाँचथरको मिक्लाजुङ–३ आरुबोटे हत्या काण्डमा मानबहादुर माखिमको संलग्नता रहेको प्रहरीले निश्कर्ष निकालेको छ । आरुबोटेमा जेठ ६ गते राति एकै परिवारका नौ जनाको सामूहिक हत्या भएको थियो । घटनापछि माखिम पनि झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए । हत्याकाण्डमा प्रहरीका चार वटा ...
हात्तीबाट जोगिन सावधान गराउने उद्देश्यले गाउँगाउँमा पोस्टर
न्यूज सञ्जाल १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ११:३७
भद्रपुर । झापाका अधिकांश स्थानमा दिउँसै जंगली हात्ती गाउँ पस्न थालेपछि स्थानीयबासीलाई सावधानी अपनाउनका लागि डिभिजन वन कार्यालय झापाले सचेतनामूलक पोस्टरहरु टाँस्न थालेको छ । कार्यालयले विशेषगरी अर्जुनधारा नगरपालिका, भद्रपुर, मेचीनगर नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका विभिन्न स्कूल तथा सार्वजनिक स्थानमा ...
आज हावाहुरीसहित पानी पर्ने !
न्यूज सञ्जाल १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०८:२९
काठमाडौं । शुक्रबार देशका मध्य पूर्व र पश्चिमका केहि स्थानमा पानी पर्ने संभावना छ। साँझपख मध्य र पुर्वका धेरै स्थान र पश्चिमका केहि स्थानमा मेघ गर्जन र हावाहुरीसहित पानी पर्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। ...